'Siyabonga Nxamalala, Msholozi' | News24
'Siyabonga Nxamalala, Msholozi'
Johannesburg - I-ANC Women's League (ANCWL) ikwakumele ukwesula kukalowo obengumengameli uJacob Zuma yanxusa ukuthi abanye abaholi basike iphethini ekuzibophezeleni ngokungenamkhawulo ekusebenzeleni umzabalazo.
UNobhala Jikelele walolu phiko, uMeokgo Matuba, uthe kuningi okusamele kwenziwe ekutheni kulethwe uguquko kwezomnotho wakuleli.
"Yize sivuma ukuthi kusekuningi okumele kwenziwe, ubuholi be-ANCWL buyawuncoma kakhulu umsebenzi owenziwe nguhulumeni we-ANC ngaphansi kwesandla sikamengameli Zuma," kusho uMatuba esitatimendeni.
"Sinxusa uhulumeni ka-ANC ukuba uqhubeke nomsebenzi wokusebenzela abampofu kanye nabasebenzi. Yi-ANC kuphela eyithemba labantu abaningi kuleli lizwe."
OLUNYE UDABA: Wehlile esikhundleni uMengameli Zuma
UMatuba uthe le nhlangano kumele iqhubeke nokuzama ukuguqula izimpilo zabantu kwezenhlalakahle nakwezomnotho kuqedwe nya ngamagalelo aba yizinsalela zombuso wabamhlophe.
"I-ANCWL ayinanazi ekutheni i-NEC ye-ANC kumele yenze izinguquko mayelana nezinhlelo, izikhungo kanye nezindlela zokulawulwa komnotho wakuleli ukuze kuvune bonke abantu bakuleli, ikakhulukazi labo abadla imbuya ngothi - iningi labo okungabantu besifazane abamnyama."
I-ANCWL iphinde yancoma uZuma ngomsebenzi awenzele inhlangano kanjalo nezwe.
"Siyabonga Nxamalala, Msholozi," kuphetha isitatimende.